Faadumo Maandeeq - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Faadumo Cabdilahi Maandeeq)
Faadumo Maandeeq waxay ahayd fanaannadaad u weyn oo ku heesta luuqadda [[Soomaalida}, Maandeeq waxay fanka soo billowday 1961 waxaa guursaday maxamed axmed kulluc ,wax caruur ma dhallin . waxey ahayd fanaannada kaliya codkeedana la keeni karin . Soomaalidu waxay ugu hibeeyeen in ay tahay horyaalka fanka. Abwaano badan oo ay ka mid yihiin Axmed Saleebaan bidde,Cali Sugulle iyo Maxamed Cali Kaarriye ayaa barnaamij ciida oo fadhiyey radio hargeysa sheegay in ay maandeeq tahay boqorada codka soomaaliyeed. aabaheed waxaa la dhahi jiray kidmaster .riwaayado badan ayey dhigtay. Waxaaba ugu waaweeynaa Riwaayadii ✓Alle Aamiin ma iisho oo ay ka dhigtay magaalada cadan ee dalka yemen 1964 iyada oo weliba aad u da' yar waxaa la matalay maxamed saleebaan tubeec oo bedeleen baxsan iyo maxamed yuusuf.gaal iyo muslim gabdhow yaa ku leh oo ay la meteshay sooraan, axmed gacayte iyo aamina cabdullaahi, waxay kale oo ay meteshay riwaayad kaligeed gabadh ka aheyd oo uu lahaa Abwaan Cali Sugulle,Lana odhan jiray himiladeena. Waxaa ka mid ahayd riwaayadii Xuskii jecelka oo uu lahaa Abwaan Sangub Riwaayadii Cilmi iyo Caado oo uu lahaa Abwaan Yuusuf Xaaji Aadan. Riwaayadii Jecel boob Uma baahna oo uu lahaa cabdiqaadir Cali cigaal(cirro) Oo ay qaaday heesaha Nayruus,Waawaa,Iyo qaar kale. Waxa ka mid ah Riwaayadii Aabahay ka samrayee uu lahaa Abwaan maxamed Cali kaarriye.laakiin waxaan rabaa inaan halkaan ku xuso aabeeheey ka samrayee adiga oo ay la meteshay tubeec iyo cigaal, heesaheeda waxaa ka mid ahaa gursamo iyo durdurkii markuu guray, jacayl boob uma baahna oo ay la meteshay tubeec, cabdikhadar xasan iyo shankaroon heesaha waxaa ka mid ahaa waqtigu na soo gaar, neyruus ,waan waan iwm. marki dambeba ay meteshay magool booska maandeeq oo heesaha loo kala qaybiyay qof kasta meesha uu ku wanaagsan . neyruus, waanwaan, waqtigu na soo gaar loo qaybay maandeeq halka mogool loo qaybay mininkiinii ,sida sida iyo hub qaado.riwaayadda waxa marka dambe metelay axmed cali cigaal iyo khadra daahir oo aheyd fanaanada kaliya oo soo dhaweysay maandeeq heeska nayruus maadaama femine voice ay leeyahiin labdadoodaba.waxay kale oo ay meteshay riwaayad oo ka turjumeysay dagaalkii 1977 oo ay la matashay cabdi cali baacalwaan iyo haboon cabdullaahi heesaheedana waxaa ka mid wardi. waxay kaloo meteshay xuski jacaylka oo ay ku jireen salaad darbi, saado, zeibnab cige iyo baacalqaan iyo rooraaye.waxay guulo fara badan ka keentay waddanka dibadiisa sida suudaan iyo shiinaha.ragga ay la heestay waxaa ka mid ✓cabdulqaadir jubba
✓Cabdi Tahliil warsame ✓cabdi cali baacalwaan ✓dauud cali masxaf ✓Cabdilaahi Diiriye sooraan ✓Maxamed Cabdilaahi gujis ✓Muuse Ismaaciil qaline ✓Axmed gacayte Yuusuf ✓cabdikhadar xasan laari ✓Xasan Aadan Samater ✓Maxamed Maxamuud Cige Busi ✓maxamed yuusuf Cabdi ✓maxamed axmed kulluc ✓Axmed cali cigaal ✓maxamed saleebaan tubeec ✓salaad maxamed darbi
✓Xuseen Yuusuf tarabi ✓cabdalle Yuusuf hannuuniye ✓Cismaan Maxamed cabdikariim Cismaan gacanlow. iyo kuwa kale oo fara badan . Maandeeq waa fanaanada keliya ee xulan jirtay Fanaanka la heesaaya. Abwaanada u dhiibay riwaayadaha iyo heesaha waxa ka mid ah ✓Abwaan Axmed Saleebaan bidde ✓Abwaan Cali Sugulle ✓Abwaan muuse Cali faruur ✓abwaan Maxamuud Cabdilaahi Sangub ✓Abwaan Maxamed Cali Kaarriye ✓Abwaan Saxardiid Maxamed Jabbiye ✓Abwaan Cabdiqaadir Cali cigaal ✓Abwaan Cabdi Cali weyd ✓Abwaan Cabdilaahi Diiriye Sooraan ✓Abwaan Maxamuud maxamed yaasiin dheeg. ✓Abwaan Hadraawi ✓Abwaan Cabdi Aadan xaad Qays. ✓Abwaan Maxamed Ayax ✓Abwaan Gudcur Rooble Yuusuf ✓Abwaan Maxamed Aadan Dacar ✓Abwaan Maxamed Cumar huryo ✓Abwaan Xuseen Aw faarax dubbad ✓Abwaan Maxamuud tukaale Cismaan ✓Abwaan Xiiray
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Faadumo_Maandeeq&oldid=210548"
Last edited on 26 Maarso 2021, at 08:13
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Maarso 2021, marka ee eheed 08:13.